Intombazane engabonakali: iqiniso legazi labantu abasha abaningi namuhla | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | 26/08/2021 17:46 | I-Biography, Izincwadi Zentsha, Inoveli emnyama
Ibinzana le-Blue Jeans
Intombazane engabonakali iyinoveli yombhali wezincwadi zothando zentsha uFrancisco de Paula Fernández González, owaziwa ngeBlue Jeans. Umsebenzi ushicilelwe ngo-Ephreli 05, 2018, ngawo umbhali wangena kulolu hlobo Thriller futhi ngaqala i-trilogy engaziwa encwadini yokuqala. Kuleli cebo lasenkantolo yamaphoyisa, kubulawa intombazane esesikoleni sayo, indawo egcwele izimfihlakalo nabasolwa.
IBlue Jeans yakhiqiza indaba lapho abantu abasha babengabadlali abaphambili, bekhombisa ngokugqamile ubunzima ababhekana nabo nokuthi bajwayele ukubhekana nabo kanjani. Okwakho, ithinta izingqinamba ezikhathazayo, ezinjengalezi: ubuxhwanguxhwangu, imithombo yezokuxhumana, izindaba ezingamanga, nokuthandwa ngokocansi. Inhloso yombhali ukucabanga ngamaqiniso intsha ebhekene nawo njengamanje.
1 Isifinyezo Intombazane engabonakali
1.1 Konke kuqala
1.2 Ukuhlangana okungalindelekile
1.3 Izivivinyo zokugcina
1.4 Ucingo oluthakazelisayo
1.5 Ukuthola okwesabekayo
2 Ukuhlaziywa Intombazane engabonakali
2.2.1 I-Aurora Rios
2.2.4 Ezinye izinhlamvu
3.1 I-Blue Jeans Works
Isifingqo Intombazane engabonakali
NgoLwesihlanu, ngoMeyi 19, 2017, abancane Aurora Ubheka izingubo zakhe ezigugile ukuthola ingubo azoyiphuma. Phelekezela ukuhlola kwakhe ngengoma yakhe ayithandayo: "Castle on the hill" ka-Ed Sheeran. Ngalokho zama ukuziba iqiniso ku ohlala ndawonye nonina, Vera. Bobabili babe nesikhathi esinzima ngemuva kukayise -Bernard- uzobashiya eminyakeni emithathu eyedlule.
Kwakungubusuku obushisayo Aurora ekugcineni uthola okuzokugqoka, agqoke izimonyo zakhe, bese ayama abuke iwashi lakhe: bekuyihora lesishiyagalombili. Ngaphambi nje kokuhamba, thola umlayezo kuWhatsApp: "Uyeza manje? Ngeke ngikwazi ukuhlala isikhathi eside. Kuze kushaye ihora lesishiyagalolunye. Shesha". Maduze, Uthatha izinto zakhe aye lapho kubekiwe khona: isikhungo iRubén Darío, ebesiseduze nekhoneni.
Intombazane engabonakali: ...
Lapho ngifika esikoleni - esasivulelwe amakilasi kusihlwa—, Aurora ikwazi ukungena ngaphandle kokubhekwa. Aqonde egumbini lokukhiya kepha uyama lapho efika enkundleni yezemidlalo, kwazise insizwa ethile ibilolonga i-basketball. Ukuze angabonakali, unquma ukuhlala lapho kuze kube yilapho indawo icacile. Khonamanjalo, uthumela iWhatsApp kunoma ngubani olindile ukuze achaze ngokwenzekile, kepha akatholi mpendulo.
Ngemuva kwemizuzu, insizwa iyahamba futhi Aurora hamba ngokushesha uye lapho uya khona. Uma engena egumbini lokugqoka akatholi muntu, cabanga ukuthi mhlawumbe usuku lwakho belunokuthile obekulindelwe. Kusenjalo, bavule umnyango, intokazi iphenduke ngokushesha, kodwa imizwa yayo yaphela lapho ibona ukuthi ngubani ofikile. Le ntokazi - ethukile - iyakhubeka iwa, ngasikhathi sinye lapho izwa khona amagama athi: "Sawubona, angiyena yini umuntu obumlindele?"
Ngabo lobo busuku, uJulia —Ofunda no-Aurora— ufundela izivivinyo zakhe zokugcina no-Emilio, lokhu ngocingo lwevidiyo ku-Skype. Bobabili bangabangani abakhulu selokhu afuduka - ekhuthazwa ngumsebenzi kayise - edolobheni elincane eminyakeni emi-3 eyedlule. Ngemuva kokuvuma ukuhlangana ngakusasa ukuze badle isidlo sasekuseni baqhubeke nezifundo zabo, bavalelisane bese beqeda ucingo.
Julia Uza ezodla isidlo sakusihlwa, umama wakhe - u-Aitana - waye-ode i-pizza. UMiguel Ángel, ubaba womndeni, ubatshela ngengozi. Ngaleso sikhathi, le ntokazi uthola ucingo akwaziwa; thamela futhi kuvela ukuthi Vera, kubuza ubani yebo ndodakazi yakho U-Aurora unaye.
UJulia umangele, ngoba ayihlobene nomngane wakhe onesizungu Yena no-Emilio baze bamhlukanise njengentombazane engabonakali.
Ekuseni ngoMgqibelo UVera wabika ukuthi indodakazi yakhe ilahlekile futhi ngokushesha icala linikezwe uSergeant Miguel Ángel, ubaba kaJulia. Ngakusasa ekuseni, isidumbu sika-Aurora ebesingaphili sitholakale kulesi sikhungo, ngokushaya ngamandla ekhanda nekhampasi eceleni kwakhe. Lesi sehlakalo esibuhlungu sishaqise wonke umuntu, esikoleni nasedolobheni.
UJulia wacasuka kakhulu ngalezi zindaba, wavele watshela u-Emilio ukuthi kufanele babuze ngokwenzekile. Ungowesifazane osemusha oqondayo futhi onelungelo lokuba nemininingwane evela kubo bobabili uyise nonina - ongumphenyi wecala. Wonke umuntu kulesi sikhungo uzobuzwa imibuzo, kanjena, kancane kancane kanti ngenkathi kuphenywa umbulali wase-Aurora, kudalulwa izimfihlo ezimangazayo nezimnyama.
Ukuhlaziywa Intombazane engabonakali
Intombazane engabonakali kwenzeka ngaphakathi I-544 páginas zihlukaniswe isandulela, izahluko ezingama-72 kanye ne-epilogue. Ingxenye ngayinye imfishane, inolimi olulula nezingxoxo ezifushane ezenza ukufunda kushelele futhi kujabulise. Umlando uwukuthi ilandiswa ngomuntu wesithathu futhi uzungu luyaqhubeka phakathi kwe- okwamanje nezikhathi ezithile zesikhathi esedlule, ikakhulukazi ngempilo ka-Aurora.
Mncane Iminyaka engama-17 ofunda amabanga aphezulu futhi Uye waba wedwa futhi wazethula kusukela ngosuku ubaba wakhe ahamba ngalo. Ubuntu bakhe bumvimbele ekubeni nabangane, ngaphezu kwalokho, ube yisisulu sokwaliwa nokuhlekwa usulu ezikhathini eziningana. Yena ubulawa ngendlela engaqondakali esikoleni lapho ayenza khona unyaka wakhe wokuqala esikoleni esiphakeme.
Ungumuntu ophambili endabeni, intombazane encane kobuhlakani obumangalisayo obune-IQ ephezulu nenkumbulo engakholeki. Ungumuntu othanda amanoveli ayimfihlakalo, ikakhulukazi lawo ka-Agatha Christie; Uthanda ukudlala i-chess futhi ukhonze uMagnus Carlsen. Njengoba uzama ukuxazulula ukubulawa kuka-Aurora, uzobhekana nephazili eliyinkimbinkimbi kakhulu empilweni yakho yonke.
Ungumfana ongajwayelekile, ovikelekile kuye ubuntu bomphakathi. Noma kunjalo, ukhona ehluke ngokuphelele lapho enoJulia; kukhona abangane abakhulu nabazethembayo. Yize ekuqaleni ekhangwe yindlela yakhe yokuba khona, ubudlelwano babo bebungobungane kuphela. U-Emilio uhamba noJulia ekuphenyweni ngokufa okungajwayelekile kuka-Aurora, okuvusa kuye umuzwa wobuntatheli.
Ku Thriller Kuzobandakanyeka abalingiswa abehlukene, okubandakanya othisha, abafundi kanye nabantu basemakhaya. Phakathi kwazo UMichelangelo ugqame -Usayitsheni wamaphoyisa Ukwahlulela kwendawo— futhi I-Aitana - i-forensic-, bobabili abaphethe icala lika-Aurora.
UFrancisco de Paula Fernández González wazalelwa eSeville ngoNovemba 7, 1978. Wahlala ebusheni bakhe eCarmona, lapho wafunda esikoleni iSalesianos nasesikoleni samabanga aphezulu iMaese Rodrigo. Uqale inyuvesi eneziqu zomthetho, kodwa ezinyangeni ezimbalwa wayazi ukuthi kwakungelona ubizo lwakhe. Wathatha umhlalaphansi, waya eMadrid futhi uthweswe iziqu njengentatheli yase-European University, futhi wayekhethekile emkhakheni wezemidlalo.
Izikhathi eziningi uhlanganyele abezindaba abahlukahlukene ngomsebenzi wakhe njengentatheli yezemidlalo. Wayengumqeqeshi wezingane emaqenjini e-futsal ePalestra Atenea Sports Club. Ngemuva kwalezo zimo, uthathe isinqumo sokuzinikela ekubhaleni, egxile ekwakhiweni kwamanoveli ohlotsheni lwentsha, okubandakanya ezothando nobuchwepheshe bamanje.
e 2009, umbhali waseSpain umphakathi Izingoma zikaPaula, ukulandisa kwakhe kokuqala, okuyinto isayinwe njengo I-Blue Jeans —Igama lomgunyathi owaziwa ngalo namuhla. Isici sakhe sokuqala saqala i-trilogy yothando lwentsha enegama elifanayo. Impumelelo yalezi zincwadi yaqeda umsebenzi wakhe. Kusukela lapho ubhale uchungechunge olwengeziwe olwedlulele nencwadi yakhe yokugcina ezimele, iThe i-thriller: Ikhempu (2021).
I-Blue Jeans Works
uchungechunge Izingoma zikaPaula:
Izingoma zikaPaula (2009)
Uyazi ngiyakuthanda? (2009)
Ngithulise ngokwanga (2011)
uchungechunge Iqembu Lezinto Ezingaqondakali:
Sawubona nkosazana! (2012)
Musa ukumamatheka ukuthi ngithandana (2013)
Ngingaphupha nawe? (2014),
Nginemfihlo: idayari kaMeri (2014)
uchungechunge Into elula kangaka:
Okuthile okulula njengoku tweeting ngiyakuthanda (2015)
Into elula njengokukuqabula (2016)
uchungechunge Intombazane engabonakali:
Intombazane engabonakali (2018)
Iphazili yekristalu (2019)
Isethembiso sikaJulia (2020)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Intombazane engabonakali